मार्केटरहरू क्र्यापको एकदम पूर्ण छन् Martech Zone
बुधबार, जुलाई 7, 2010 बुधबार, जुन 7, 2017 Douglas Karr
म सुन्दै छु प्रभावकारी परियोजना। यो वास्तवमै चाखलाग्दो परियोजना हो - --० मिनेट बाट 60 सेकेन्डको सल्लाहहरू को हो वेबमा प्रभाव अनलाइन बनाउने बारेमा कुरा गर्दै। म अलिकति तीतो हुन सक्छु कि मलाई मद्दतको लागि आमन्त्रित गरिएन, तर म यी मानिसहरूलाई सुन्दैछु ... म यो महसुस गर्न सक्छु कि तिनीहरू मध्ये धेरै केवल धूर्त थिए।
पहिले, तपाईंले सूची मार्फत पढ्नु भएपछि, तपाईंको गृहकार्य गर्नुहोस् ... वास्तवमा ती व्यक्तिहरू अनलाइन तिनीहरूको प्रभाव निर्माण गर्दैन। तिनीहरू पहिले नै प्रभावशाली थिए अनि तेस्पछि अनलाइन भयो। अझै, अरू प्रभावशाली थिए किनकि उनीहरू सफल पुस्तकहरू लेख्थे वा सफल व्यवसायहरू सिर्जना गर्थे। अर्को शब्दमा, तिनीहरू पहिले नै प्रभाव थियो। त्योले भन्यो, "मैले ती सबैलाई गरेको कडा मेहनतको लागि सम्मान गर्छु ... म असन्तुष्ट छु कि तिनीहरू विज्ञहरु हुन् मानिसहरूलाई अनलाइन प्रभाव पार्दै.
मलाई विश्वास गर्नुहुन्न? जानुहोस् मान्छे को सूची तल र ती सर्कलहरू जसले वास्तवमै उनीहरूको आफ्नै प्रभाव अनलाइन सिर्जना गर्दछ।
एनी ह्यान्डली, एनी हल्यान्ड, ब्रायन क्लार्क, जेसन फल्स, लिज स्ट्रस, हग म्याकलोड, डान स्क्वेल, स्टीव वुड्रफ, क्रिस ग्यारेट... केहि थोरै नाम लिन को लागी कसैलाई थाहा थिएन यी व्यक्तिहरू को थिए उनीहरूको कोर्रा, ब्लीड र क्रलमा पुग्नु अघि प्रभाव। तिनीहरूले यो जोखिम लिएर, पिग्गी बैंकहरूमा सम्मेलनको लागि यात्रामा बचत गरेर, बिहानको गहिरो घण्टासम्म काम गर्ने, दिनका कामहरू जुगाडि राख्ने र जिग भाषा बोल्ने, आफ्नो जागिर गुमाउने, ब्लग र ईबुक लेख्ने…
यी व्यक्तिहरूले अथक प्रयासको साथ आफ्नो नेटवर्कमा प्रभाव प्राप्त गरे कडा मिहिनेत.
मैले चिनेका कोही व्यक्तिहरू छक्क पर्दछन् जुन मैले एक बर्ष भन्दा कम समयमा सफल व्यवसाय शुरू गरें। एक बर्ष भन्दा कममा? साँच्चै? मान्छे - म यो मा एक दशक को लागी काम गरीरहेको छु! ग्राहकहरु को बारे मा ब्लगिंग को लागी मेरा मालिकहरु संग दश वर्ष समस्यामा। कुनै निन्द्रा को वर्षहरु। Day दिन कार्य हप्ताको बर्ष। इन्टर्नेटमा बस्ने बर्ष। म परियोजनामा ​​ती व्यक्तिहरू जस्तै प्रभावको उही छिमेकीको पनि नजिक छैनँ - तर मलाई थाहा छ उनीहरू कती मेहनत गरिरहेछन् जहाँ उनीहरू छन् जहाँ।
हास्यास्पद कुरा के हो, तपाईं प्रभाव प्रोजेक्ट सुन्नुहुन्छ, केहि यी प्रभावकारीहरू वास्तवमा ठ्याक्कै कसरी बिर्सनुभयो तिनीहरूले त्यहाँ पुगे! मैले यस्ता कुरा सुनेन ...
एक उच्च जोखिमको सुरुवातमा सहभागी हुनुहोस् जुन बजियनहरू बनाउन, एक बेच्ने-बेच्ने पुस्तक लेख्ने, एउटा हास्यपूर्ण कास्टिक धम्की दिने व्यक्ति हो जसले धेरै संख्यामा गर्छ, एक सफल परम्परागत एजेन्सी सुरू गर्नुहोस् र त्यसपछि अनलाइन चाल पाउनुहोस्, एक विशेषज्ञ अफ-लाइन बन्नुहोस्…
मैले एउटा सामाजिक नेटवर्कमा सामेल हुने वा केही उपकरण अनलाइन प्रयोग गर्न सुरू गर्ने बकवास सुनेको छु। तिमी म सँग जिस्केको? उपकरणहरू केवल त्यस्तै ... उपकरणहरू छन्! मलाई पेन्टहरूको बक्स र केही हप्ता दिनुहोस् र म तपाईंलाई एक पेन्टि show देखाउँछु जुन चौथो-कक्षाको कक्षाको सीमित स्तरसँग मिल्दछ। मानिसहरूलाई प्रभावको लागि अनलाइन उपकरणहरू दिँदा उनीहरूले मलाई प्रयोगशाला दिनुभन्दा नोबेल पुरस्कार जित्न सहयोग पुर्‍याउँछन्।
यस परियोजनाको साथमा केहि महान सन्देशहरू छन्, मलाई गलत नबनाऊ। म वास्तवमै तीतो छैन ... साँच्चै। 🙂
त्यसोभए ... तपाईं मानिसहरूलाई प्रभाव पार्न चाहानुहुन्छ? तपाईंको शिल्पलाई सान बनाउनुहोस् जब सम्म तपाईं यो भित्र र बाहिर जान्नुहुन्न। नेतृत्व लिन को लागी प्रत्येक अवसर लिनुहोस् वा स्वयंको नाम बाहिर निकाल्नुहोस्। सबैलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईंको नियोक्ताको सट्टा आफ्नै भविष्यमा लगानी गर्नुहोस् ... वा त्यो अर्को भुक्तान बढावा वा पदोन्नति गर्नुहोस्। असफल असफल असफल असफल असफल फेरि असफल। तपाईंको नाम निकाल्नुहोस्। आफैलाई एक विशेषज्ञ कल गर्नुहोस्। खिसी गर्नुहोस्। बोल्नुहोस् - तपाईं सम्भवतया चूस्नुहोस्, तर तपाईं राम्रो हुनुहुनेछ। मिहिनेत गर्नु।
मलाई लाग्छ मेरो seconds० सेकेन्ड सकियो।
नोट: यस्तो देखिन्छ कि फास्ट कम्पनीले आफ्नै प्रभावकारी प्रोजेक्ट चलाइरहेको छ।
टैग: एनी ह्यान्डलीएनी हल्यान्डब्रायन क्लार्कक्रिस ग्यारेटडान स्कावबलहग म्याकोडप्रभावप्रभावजेसन खस्छलिज स्ट्रसस्टीभ वुड्रफप्रभावकारी परियोजना
उत्तम। पोस्ट। कहिल्यै।
म खुसी छु कि कसैलाई यो भन्न बालुवा थियो। प्रभाव निर्माण गर्ने र आफ्नो भाग्य निर्माण गर्ने कार्य Facebook मा सामान लाइक गरेर र यसलाई एक दिन कल गरेर हुँदैन।
यो उत्कृष्ट ब्लग पोष्टहरूबाट पनि आउँदैन।
यो सबै सडकमा खुट्टाको बारेमा हो।
तपाईंको साठ सेकेन्ड सकियो, तर यो यति राम्रो थियो, मैले यसलाई दुईपटक पढें।
महान पोस्ट डग। मैले पनि सम्मेलन सुनेको थिएँ । समग्रमा त्यहाँ केहि राम्रा बिन्दुहरू बनाइएका थिए, तर म तपाईंको धेरै पोष्टसँग सहमत छु।
एक्कासी सोचें कि म त्यति विचलित छैन कि मैले सम्मेलन छुटेको छु।